Mareykanka oo ka hadlay Somalia | maakhir.com
Mareykanka oo ka hadlay Somalia
November 1, 2007 in Somalia | Tags: Somalia
Ergayga gaarka ah ee dowladda Maraykanka ugu qaabilsan Soomaaliya ayaa ku dhowaaday in uu qiro in ay si aan sax ahayn u arkeen heerka diidmada ciidamada Ethiopia ee la geeyey dalka Soomaaliya ee ay colaaduhu halakeeyeen.
Ergaygu waxa uu ku sigtay in uu dhaleeceeyo joogitaanka ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya iyo xoogga loo isticmaalay in lagu xakameeyo kooxaha kacdoonka wada.
Danjire John Yates, waxa uu la hadlayey BBC-da iyadoo ay hay’adaha gargaarku ka digeen xaaladda bani’aadannimada Soomaaliya oo meel halis ah maraysa, kaddib markii tobannaan kun oo qof ay ka carareen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, markii uu dagaal kulul muddo saddex maalmood ah halkaasi ka socday.
Hay’aduhu waxay ku eedeeyeen dowladda KMG ah ee Soomaaliya in ay ku xadgudubtay sharciga xuquuqda bani’aadamka kaddib markii ay is-hortaagtay in wax loo qaban karo dadkaasi ka cararay dagaallada, waxayna hay’aduhu ka digeen in xaaladdu ay sidaasi ka sii dari kart
Dadka ka soo horjeeda joogitaanka ciidammada Itoobiya ee dalka Soomaaliya, ciidankaas oo taageeraya dowlada ku meel gaarka ee taagta daran ee Soomaaliya dagaal ayaa lagala hortegay. dad cabasho samayenayay dhammaadkii toddobaadka ayaa waxaa lagala hortegay rasaas iyo xabbado habaw ah oo ay ku soo fureen xoogagaa ammaanka.
Ciidammada Itoobiya markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldarreysteen inay dadka difaacaan. wixii waqtigaas ka dambeeyay toban kun oo qof ayaa alaabooyinkooda ka xir-xirtay oo magaalada isaga cararay. hay’adaha gargaarku waxay sheegeen inay dhici karto in ilaa boqol kun oo qof ay maalmihii ugu dambeeyay magaalada ka baxeen.
Waxaana dadkaasi ay ku biireen ilaa afar boqol oo kun oo horraantii sanadka magaalada ka baxay. iyadoo ay jirto marnaasho siyaasadeed ee jagadii uu ka tegay ra’iisal wasaare Cali Maxamed Geeddi, maalintii Isniintii ayaa waxaa weli aad u sarreeya xiisadda ka dhex taagan dadka Muqdisho deggan. Verity Johnson waxay ka tirsan tahay hay’adda samafalka ee Oxfam.
Ciidamada Ethiopia ee ku sugan Somalia
Tiro ka mid ah hay’adaha gargaarku waxay dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ku eedeynayaan xadgudubyo sharciga xuquuqda aadanaha, iyadoo u diidday in loo tago dadka barakacay. waqti sii horreeyay hay’adaha qaarkood waxay dowladda Soomaaliya kuba eedeeyeen inay gashay dembiyo dagaal.
Ergayga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, John Yates, waxaa uu qirtay in joogitaanka ciidammada Itoobiya, sida uu hadalka u dhigay, ay arrimaha is-beddel ku sameeyeen, waxaana uu muujiyay inay dhici karto in ay qiyaasta jawigu ka khaldantay. hase ahaatee waxaa uu ku dhowaaday inuu yiraahdo dowladda Soomaalidu sharciga ayay ka baxday, iyadoo halis gelisay nolosha boqollaal kun oo qof oo rayid ah.
“Beesha caalamka ee deeqaha bixisa waxay dhibaato kala kulantay dowladda KMG ah. Safaaraddan iyo deeq-bixiyeyaal kale oo caalami ah ayaa amuurta soo farageliyey iyo dowladda KMG ah xaaladahan dartood waxayna isku dayeen in arrimaha la toosiyo”.
Weli waxaa jira dagaallo badan si mucaawinada gargaarka loo gaarsiiyo dadka, waxaana iska cad in ay jiraan arrimo khadlan Soomaaliya gudaheeda, laakin anigu diyaar uma ahi in aan farta ku fiiqo cidna in ay gashay dembi dagaal weli.
Madaxweynaha Soomaaliya, Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa uu kulammo la yeelanayay wasiirro dowladda Itoobiya ka socda si loo qiimeeyo xaaladda ammaanka ee sii xumaaneysa ee magaalada Muqdisho. dhibaatada ku saabsan helitaanka ra’iisal wasaare cusub oo noqon doona xoog mideeya dalka, waxay iyaduna u baahan tahay in la buuxiyo.
« The FIO Pledge for Free Oromia heralds the End of the ‘Ethiopian’ Tyranny
Saxaafada Soomaalida iyo Kacdoonka Laascaanood »